UKUCINGA NGOLUSIFA NOTHIXO BACULA 'LES MIS' - UTHIXO
Intombazana Ephuphayo Emanic Pixie
U-Dick Van Dyke
Ewe, Ndisacinga ngoLucifer kunye noThixo Ukucula Izisulu Ezingalunganga kuLusifa
Lusifa ngumboniso endinokuthi kunzima ukuwuchaza, kodwa ngoku ndingabonisa bonke abahlobo bam uLucifer Morningstar noThixo abaculayo Usizana omnye komnye kwaye uyisebenzise njengendawo yokutsiba-kude. Isiqendu, esihloko sithi Bloody Celestial Karaoke Jam, yindlela kaThixo yokunxibelelana noLusifa. Uyazi ukuba ingelosi yakhe ewileyo yonyana uthanda ukucula (esikubonile kumaxesha adlulileyo kubandakanya endikuthandayo: uLucifer Morningstar ecula uCreep nguRadiohead).
Ke, ucenga uLucifer ukuba acule ngakumbi, kwaye uLusifa umxelela ukuba hayi. Kodwa ekubeni enguThixo unezixhobo zayo, nto leyo ethetha ukuba angabenza bonke abo bamngqongileyo uLusifa (kunye noLuci ngokwakhe) bacule iimvakalelo zabo, kuninzi ekukhathazekeni kukaLusifa.
Makhe ndibeke umboniso ngale ngoma kancinci. Ndiphuphe Iphupha libhaladi kaFantine Usizana kwaye uza phambi kokusweleka kwakhe njengoko ecula ngobomi awayenokubunabo, ikamva awayelinqwenelela yena kunye nentombi yakhe, uCosette, kunye nesihogo awayenaso ubomi bakhe emva kokuba ephulukene nayo yonke into. Kwimeko ye- Lusifa , ingakumbi ngokugxothwa ngokoqobo kukaLucifer esihogweni kunye nentiyo ayigcinileyo uThixo ngenxa yayo.
UDennis Haysbert udlala ngoThixo kwaye, ukuba ungumlandeli 24 njengokuba ndandikwishumi elivisayo, uyazi ukuba ukwanguMongameli waseMelika uDavid Palmer. Kodwa ukumbona njengoThixo kwaye engulo mntu uxolelayo, nditsho noLusifa exelela icala lakhe lezinto kumaxesha amahlanu okugqibela, lo mzuzu ubethwe ngendlela ebendingayilindelanga. Ngokuqinisekileyo, Lusifa iyonwabisa kwaye inamaxesha ayo xa ushukunyiswa ngokungalindelekanga ngokweemvakalelo, kodwa khange ndilindele ukuziva oku kuqhotyoshelwe kumxholo webali ngoThixo noLusifa. Ke kwakhona, yile nto yenza lo mboniso ubonakale ngokuqaqamba. Inamathela kwiinzipho zayo kuwe kwaye ngequbuliso ukhalela ukukhula ngokweemvakalelo kukaMtyholi.
Eyona nto kukuba, oku phantse akwenzekanga. Siphantse safumana uLusifa noThixo bacula uYise noNyana nguCat Stevens, enye intandokazi yam, ke ngekhe ndilile nangoku. Kodwa uStevens uwukhanyele umboniso ilungelo ukusebenzisa ishuni esibuhlungu kwaye, endaweni yoko, inkwenkwezi uTom Ellis wacebisa ukuba basebenzise ibhaladi kaFantine Usizana endaweni yayo.
Kuyinto entle entle kulwalamano lwabo kunye nokukhula okwenziwe nguLuci kulo lonke uthotho. Nini Lusifa waqala, ecinga ngendlela angazincama ngayo ngokuzithandela kunye nokuphila kwakhe ngenxa yomntu kungabonakala ngathi liphupha lombhobho, ukanti ukhulile kuthando lwakhe ngoKloe kunye noxabiso ngoMhlaba ngelixa ephethe uLux. Usebenze ngokwakhe noLinda, kwaye kuninzi nje malunga noLucifer Morningstar otshintshile wangcono, kwaye le ntsebenzo yeNdiphupha Iphupha isinike umbono wokwenene kubunzulu bentlungu uLucifer anayo ngenxa kayise.
Andikwazi kulinda ixesha lokugqibela Lusifa, kodwa ndingathanda ukubulela ubuchule emva kwalo mboniso uzukileyo ngokunikela Mna eli phupha ndingazange ndazi ukuba ndinalo / ndilifunayo.
Ilungelo Lokungena Kwelinye Ilizwe
thumela isele elibuhlungu kwakhona
Ingoma ka-phil collins kwingoma ye-tarzan
ufuna ukwazi ngakumbi amajoni eenkwenkwezi
ulele u-tim burton imovie epheleleyo
Amantombazana e-gilmore logan kunye ne-rory
Kutheni le caillou ingenazinwele